के बालबालिकाहरु मोटोपनको सिकार हुँदैछन् ? - नेपाल एक्सन Online News Nepal
के बालबालिकाहरु मोटोपनको सिकार हुँदैछन् ?
Sep 10, 2021 #स्वस्थ-जीवनशैली
पहिले बालबच्चा मोटाघाटा भए आमाबुवा सन्तुष्ट हुन्थे । छोराछोरी ‘खाइलाग्दा ज्यानका’ भए भनेर दंग पर्थे । त्यसबेला बच्चाहरु घरबाहिर खेल्ने, उफ्रने, दौडने गर्थे । जंकफुड सहजै उपलब्ध हुँदैनथ्यो । र, उनीहरुको शरीर भद्दा देखिदैनथ्यो ।
अहिले भने बच्चाहरुको मोटोपन आमाबुवाको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको छ । बच्चाहरु अस्वभाविक मोटाएका छन् । उनीहरुको शरीर भद्दा देखिएको छ । उनीहरु सुस्त र कमजोर पनि हुने गरेका छन् ।
सामान्य मोटो हुनु समस्या भएन । तर, अस्वभाविक रुपमा बढ्ने मोटोपनले रोग निम्त्याउँछ । अहिले बालबालिकाहरु एकै ठाउँमा बस्ने, जंकफुड खाने गर्छन् । उनीहरुको सुत्ने, उठ्ने तालिका पनि निश्चित छैन । यही कारण मोटोपनको शिकार भएका छन् ।
अहिलेका बालकालिकामा मोटोपनको समस्या बढ्दो मोटोपन भएमा के हुन्छ ?
अहिलेको अवस्थामा यो कुरा दम्पतीका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । मोटोपनले शरीरलाई भद्दा मात्र बनाउने होइन, अनेक रोग पैदा गर्छ । विभिन्न अध्ययनबाट के देखिएको छ भने बाल्यकालमा बढेको मोटोपनले दीर्घकालसम्म स्वास्थ्य समस्या ल्याउँछ ।
युरोपमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार अहिले धेरै दम्पतीले एउटा मात्र सन्तान हुर्काइरहेका छन् । आमाबुवा एवं घर परिवारको सम्पूर्ण ध्यान नै उक्त बच्चामा केन्द्रित हुन्छ । बच्चालाई आवश्यक्ताभन्दा बढी स्यहारसुसार गर्ने र खानपिन गराउने हुन्छ । यसले बच्चामा मोटोपन बढाउने जोखिम रहन्छ । युरोपमा बालबच्चामा बढ्दो मोटोपन आमाबुवाको लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । इटाली, स्पेन र साइप्रसका बच्चाहरुमा मोटोपनको समस्या यरोपको उत्तरी देशहरुको तुलनामा तीन गुणा बढि छ ।
बाल्यकालमै मोटोपन बढेपछि उनीहरुमा त्यसको असर कहिलेसम्म रहन्छ त ? सामान्यत ७० प्रतिशत बच्चाको मोटोपना वयस्क अवस्थामा पुग्दा कम हुने सम्भावना हुन्छ । एक तिहाई बच्चामा किशोरवस्थासम्म पनि मोटोपना कायम नै रहन्छ । स्कूलहरुको बच्चामा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार हरेक १० जना बच्चाहरुमा १ जना बच्चामा मोटोपनाको समस्या देखिन्छ । तीव्र गतिमा परिर्वतन भएको जीवनशैली र खानपानको बानीका कारण यस्तो भएको हो ।
जुन बच्चामा मोटोपनको समस्या हुन्छ, त्यो बच्चालाई मुटु सम्बन्धि रोग लाग्ने खतरा ३५ प्रतिशतसम्म बढि हुन्छ । मोटो बच्चामा उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रोलको स्तर, मधुमेह र ह्दयघात हुने खतरा बढि हुन्छ ।
बच्चा बाल्यवस्थामा नै मोटोपनको शिकार भएमा यसको परिणाम उसले जीवनभर भोग्न पर्छ । मोटोपनसँग सम्बन्धि रोगहरु जस्तै मधुमेह जस्ता रोगहरुको शिकार बन्न सक्छन् । बिट्रिस मेडिकल जर्नल लान्सेन्टमा प्रकाशित एक सर्वेक्षण अनुसार मोटोपनको कारण गर्भाशयको क्यान्सर हुने सम्भावना बढि हुन्छ । त्यस्तै पित्ताशय, गुद्वार, गर्भाशय, थाइराइड र ब्लड क्यान्सर हुने सम्भावना पनि त्यतिकै हुन्छ । धेरै तौल हुनाले लिभर, मलाशय, अन्डकोष र स्तन क्यान्सरको पनि खतरा बढि हुन्छ । लन्डन स्कूल अफ हाइजीन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनका शोधकर्ताहरुको अनुसार अत्याधिक रोगहरुको कारण मोटोपना हो ।
न्यूट्रीसन एन्ड डायबिटीजमा प्रकाशित अध्ययनको अनुसार बच्चाको मोटोपनाको प्रमुख कारण उनीहरुको खानपान र उनीहरुको टीभी हेर्ने बानी हुन् र यसमा आमा–बुबाको भुमिका पनि महत्वपुर्ण हुन्छ । खानाको तुलनामा व्यायामको कमीका कारण पनि मोटोपनको समस्या हुन्छ ।
के गर्ने, जब विपरित स्वभावका साथीसँग जीवन विताउनुपर्ने हुन्छ ?
मर्निङवाकमा मोबाइल : हुन सक्छ घातक